AllPass Pro uye FineScanner PRO, ikozvino iri kutengeswa kutanga svondo kubva kurudyi | IPhone nhau
Kugamuchirwa kuMuvhuro mutsva! Simbisa zviso izvi nekuti kunyangwe isu tichine mazuva mashanu pamberi pebasa rakaoma, zvidzidzo uye mamwe mabasa mashoma, kuverenga kusvika kupera kwevhiki kunotevera kwatangawo. Zvakare, kubvira IPhone nhau Isu tinogara tichikuperekedza panzendo idzi dzakaoma, kuyedza kukuita kuti unakidzwe nazvo nenzira yakanaka.
Ndokusaka nhasi Muvhuro tinotanga nhevedzano ye kunyorera pane kupihwa iyo yaunogona kunakidzwa izvozvi. Aya anobhadharwa maapplication iwe aunogona ikozvino kuwana mahara kana, zvirinani, nechakakosha dhisikaundi. Saka iwe unogona kusevha zvishoma kuti utize vhiki inotevera, tenga iyo nyowani iPhone X kana kungopunyuka kwechinguva kubva pane zvinodiwa nemukuru wako nekuyedza kutsvaga kwako kutsva.
1 Mapassword ako aripo uye akachengeteka neAllPass Pro
Mapassword ako aripo uye akachengeteka neAllPass Pro
Kana iwe uchida a ane simba uye anoshanda password password pamusoro peizvo iCloud Keychain inotipa, AllPass Pro inogona kunge iri mhinduro yauri kutsvaga, kunyanya izvozvi kuti iwe ungaiwana mahara kwenguva pfupi.
AllPass Pro chikumbiro chauchitove nacho haufanire kuyeuka imwezve password kupfuura iyo AllPass ProNekuti zvese zvako zvekupinda magwaro zvakachengetwa muayo "chengetedzo yevhavha" Ichi chishandiso chinochengeta rako rese rakakosha ruzivo mune yekuchengetedza vault.
NeAllPas Pro iwe uchakwanisa ku:
Sevha zvese ruzivo rwemakadhi ako echikwereti uye echikwereti, pamwe ne data rezvipenga zvako (zita rekushandisa nephasiwedi) uye kunyangwe zvinyorwa zvako.
Pinda kumapeji ewebhu kwawakanyoresa pasina kumanikidzwa kurangarira imwe neimwe yadzo mapassword.
Yakazara kubhadhara uye ruzivo rwevanhu otomatiki, pasina kutevedzera nekunyora nguva dzose.
Iyo ine mashandiro e Nhoroondo uye Favorites, saka unogona kukurumidza kuwana izvo zvaunoshandisa zvakanyanya.
Iyo zvakare ine Kurumidza kutsvaga.
Yakakwirira chengetedzo encryption ne 256-bit AES kunyorera
Unlimited data yekuchengetedza
Support for folders yesangano riri nani
Mhando dzakasiyana dze akajairwa matemplate kuita kuti zvive nyore uye nekukurumidza kuti iwe upinde iyo data.
Kuzvikiyira wega, nenzira yekuti data rako rirambe rakachengeteka kunyangwe yako iPhone ikabiwa kana kurasikirwa.
Kubvumirana neakasara emidziyo yako yeIOS: chengetedza iyo yekuwana data kune webhusaiti kubva kune yako iPad, uye iwe uchaita kuti ive iripo nekusingaperi pane yako iPhone.
Backup kuburikidza neICloud kana iTunes
Kugoneka kwe dzosera data rako kuburikidza neICloud, Mail kana iTunes
Iwe unogona kupinza uye kutumira kunze data rako kuburikidza ne CSV faira, email meseji kana kubva iTunes.
Mhando dzakasiyana dzemifananidzo kuti iwe ugone kukurumidza kugadzirisa uye kuona zvinyorwa zvako.
»AllPas Pro» ine mutengo wenguva dzose we3,49 euros, asi ikozvino unogona kuiwana yemahara muApp Store. Ehe, iwe unofanirwa kukurumidza nekuti ini ndinotya kuti app iri muchikamu ichi haigare kwenguva refu mahara.
Sezvo ungangove watoona kubva pazita rayo, dai wanga usati watoiziva, "FineScanner PRO" chishandiso chaunogona nacho tarisa mhando dzese dzemifananidzo uye zvinyorwa kuti uzvichengete muPDF fomati.
MuApp Store munotova nezvakawanda zvakafanana zvekushandisa, mazhinji acho anozadzisa basa racho zvakaringana kunyangwe akasununguka zvachose, zvisinei, pamwe "FineScanner PRO" inosanganisira zvimwe zvakanaka zvinoita kuti utarise kutora kwayo sebasa rayo kucherechedzwa kwemavara (OCR) mumitauro makumi matatu nemapfumbamwe izvo zvinoita kuti zvive zvakakwana kune avo vanowanzoenda kunze kwenyika, anosvika pamapeji zana pagwaro, 12 mafomati ekuburitsa (.docx, .pdf, .txt, nezvimwewo), iCloud Drive yekuchengetedza, otomatiki peji muganho kuona, marongero emavara, kupenya, musiyano, export kune mamwe masevhisi akaita saEvernote, uye nezvimwe. Muchidimbu, "FineScanner PRO" ndeyekushandisa zvakanyanya uye zvine hunyanzvi.
"FineScanner PRO" ine mutengo unowanzoitika wee64,99 euros, zvakadaro ikozvino unogona riwane chete e10,99 euros MuApp Store, mutengo unoshamisa uyo, isu tinofungidzira, unenge usingaite kwenguva yakareba kana. Saka kana iwe uchida kumubata, kurumidza. Rangarira kuti kana ikasazadzikisa zvaunotarisira, unogona kuidzorera uye uwane mari yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » AllPass Pro uye FineScanner PRO, ikozvino iri kutengeswa kutanga svondo kubva kurudyi
Kukanganisa kwangu, neimwe nzira zvine chekuita nenyaya yacho. Ndakanga ndine tad nyadzi. Ini ndakarasa rondedzero yangu uye ini nekukurumidza ndinofanirwa kuburitsa yazvino imwe chete. Ndiri kukwanisa kusagadzira nesimba rangu chairo, saka ini ndaifanirwa kushandisa parondedzero yekugadzira rutsigiro rwemari yakaoma yakawanikwa. Wakawana zvidimbu zvidimbu zvemukati maererano neizvi, asi ini handina zano kana uchigona kuvimba nevatapi ava. Pane chero munhu akambonzwa nezve takuroichi.com ?
Mhoro shamwari, peji rakanakisa rekuramba uchiziva zveApple. Ndine mhinduro yemubvunzo kuna iOS 11 asi muAppStore nyowani handisi kuona iyo yemahara app yevhiki. Ivo vakabvisa iyo yemahara app yevhiki?